Hamro Yatra | » नेपालको पासपोर्ट कमजोरको सुचीमा, कुन देशको पासपोर्ट सबैभन्दा उत्कृष्ट ? नेपालको पासपोर्ट कमजोरको सुचीमा, कुन देशको पासपोर्ट सबैभन्दा उत्कृष्ट ? – Hamro Yatra
> नेपालको पासपोर्ट कमजोरको सुचीमा, कुन देशको पासपोर्ट सबैभन्दा उत्कृष्ट ?
नेपालको पासपोर्ट कमजोरको सुचीमा, कुन देशको पासपोर्ट सबैभन्दा उत्कृष्ट ?
२४ पुस, काठमाडौँ । नेपालको पासपोर्ट, सन् २०२१ मा विश्वको सबैभन्दा खराब पासपोर्टको सुचीमा १०४ औं स्थानमा परेको छ । केवल ३८ देशमा यात्रा अनुमति भएको नेपाल र लिबिया, विश्वको सबै भन्दा कमजोर पासपोर्टको सुचीमा १०४औं स्थानमा रहेका छन् ।
त्यसपछि दिश्रो स्थानमा सिंगापुर रहेको छ जसलाई १९० गन्तब्यमा फ्रि-भिसा उपलब्ध छ र तेश्रो स्थानमा दक्षिण कोरिया र जर्मनी पदर्छ, दुवैलाई १८९ गन्तब्य स्थानमा भिसा सहित जाने अनुमति छ ।
विश्वको उत्कृष्ट १० पासपोर्ट मध्ये न्युजील्याण्ड १८५ गन्तब्यमा फ्रि-भिसाको साथमा सातौं स्थानमा छ र अष्ट्रेलिया १८४ गन्तब्य स्थानमा जाने अनुमति संगै आठौँ नम्बरमा छ ।
कोरोना महामारीले प्रतिबन्ध लगाइएको कारण, बेलायत र अमेरिकाको पासपोर्ट विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्टको सातौँ नम्बरमा छन् ।
अमेरिकी पासपोर्ट भएका मानिस अहिले केवल ७५ गन्तब्यमा जान अनुमति पाएका छन् । बेलायतको पासपोर्ट भएका व्यक्तिले अहिले केवल ७० वटा देशमा भिसा पाउनेछन् ।
संयुक्त अरब इमरेट्सले सन् २०२०मा उच्च मान्यताको भिसा सम्झौताहरु गरेको छ र कतिपय राष्ट्रलाई निशुल्क भिसा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।